ကွန်ပျူ တာမ၀ယ်ခင် ကြို တင်လေ့လာသင့်သည့် အချက်များ | Buzzy
Laptop ကွန်ပျူ တာတစ်လုံးနှင့် အတူ Desktop ကွန်ပျူ တာပစ္စည်းများ ကိုစိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူမည်ဆိုပါက....
ကွန်ပျူ တာမ၀ယ်ခင်မှာ ကွန်ပျူ တာရဲ. အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို သိထားသင့်ပါတယ်။ကွန်ပျူ တာဖြင့် အလုပ်မလုပ်ခင်မှာ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးရဲ. လုပ်ငန်းကို အခြေခံနားလည်ထားသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနားလည်ထားခြင်းက မိမိအသုံးပြု မည့် လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်ပြီး မိမိကြို က်ရာ ပစ္စည်းတွေကို ၀ယ်ယူနုိုင်မှာပါ။နံပါတ် ၁ ကတော့ ကွန်ပျူတာ မှန်ပြင်ဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူ တာရဲ. လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ မှန်ပြင်ကနေ ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ မှန်ပြင်မှာ လည်းများစွာသော တံဆိပ်တွေနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေကွာခြားမှု ရှိပါတယ်။နံပါတ် ၉ mouse နှင့် နံပါတ် ၁၀ keyboard ကတော့ ကွန်ပျူ တာဝယ်လိုက်သည် နှင့် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း အသေးစားများဖြစ်ပါတယ်။
ကှနျပြူ တာမဝယျခငျမှာ ကှနျပြူ တာရဲ. အစိတျအပိုငျးအားလုံးကို သိထားသငျ့ပါတယျ။ကှနျပြူ တာဖွငျ့ အလုပျမလုပျခငျမှာ အစိတျအပိုငျးအားလုံးရဲ. လုပျငနျးကို အခွခေံနားလညျထားသငျ့ပါတယျ။အဲ့ဒီလိုနားလညျထားခွငျးက မိမိအသုံးပွု မညျ့ လုပျငနျးအပျေါမူတညျပွီး မိမိကွို ကျရာ ပစ်စညျးတှကေို ဝယျယူနုိုငျမှာပါ။နံပါတျ ၁ ကတော့ ကှနျပြူတာ မှနျပွငျဖွဈပွီး ကှနျပြူ တာရဲ. လုပျဆောငျခကျြတှဟော မှနျပွငျကနေ ကွညျ့နိုငျမှာဖွဈပါတယျ။အဲ့ဒီ မှနျပွငျမှာ လညျးမြားစှာသော တံဆိပျတှနှေငျ့ လုပျငနျးစှမျးဆောငျရညျတှကှောခွားမှု ရှိပါတယျ။နံပါတျ ၉ mouse နှငျ့ နံပါတျ ၁၀ keyboard ကတော့ ကှနျပြူ တာဝယျလိုကျသညျ နှငျ့ လိုအပျတဲ့ ပစ်စညျး အသေးစားမြားဖွဈပါတယျ။
ကွန်ပျူ တာ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လျှပ်စစ် ပတ်လမ်းများကို Motherboard လို့ ခေါ်တဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားပါတယ်။Motherboard လျှပ်စစ် ဘုတ်ပြားကတော့ ကွန်ပျူ တာရဲ. လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လည်ပတ်နိုင်အောင် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများတပ်ဆင်ထားတာပါ။Motherboard မှာ သတိထားရမှာ က လျှပ်စစ်ပတ်လမ်း ပြဿနာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ မိုးမိခြင်းဖြစ်စေ ၊ လျှပ်စစ်ပါဝါ မငြိမ်သက်မှု ကြောင့် ဖြစ်စေ ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။
ကှနျပြူ တာ လညျပတျလုပျဆောငျနျိုငျရနျ လြှပျစဈ ပတျလမျးမြားကို Motherboard လို့ ချေါတဲ့ လြှပျစဈပစ်စညျးမြားတပျဆငျထားပါတယျ။Motherboard လြှပျစဈ ဘုတျပွားကတော့ ကှနျပြူ တာရဲ. လိုအပျတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို လညျပတျနိုငျအောငျ လြှပျစဈပတျလမျးမြားတပျဆငျထားတာပါ။Motherboard မှာ သတိထားရမှာ က လြှပျစဈပတျလမျး ပွ ဿ နာတှရှေိတတျပါတယျ။ မိုးမိခွငျးဖွဈစေ ၊ လြှပျစဈပါဝါ မငွိမျသကျမှု ကွောငျ့ ဖွဈစေ ပကျြစီးတတျပါတယျ။
ကွန်ပျူ တာ ဂရပ်ဖစ်ကဒ်က တော့ ရုပ်သံပိုင်းတွေပို မို ကြည်လင်ပြတ်သားအောင်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့် Motherboard တို့ ရဲ.အလုပ်လုပ်ပုံတို့ ဟာလည်း ကိုက်ညီဖို့ လိုပါတယ်။ graphics processing unit လို့ လူသိများတဲ့ GPU ကဒ်ဟာ ဂိမ်းကစားခြင်း ၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းတွေမှာ အရမ်းကို အရေးပါတဲ့ ကွန်ပျူ တာ hardware ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအရ ၂ ကဒ် သို့ မဟုတ် ၃ ကဒ် ထိ တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အခြားသော ကွန်ပျူ တာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကှနျပြူ တာ ဂရပျဖဈကဒျက တော့ ရုပျသံပိုငျးတှပေို မို ကွညျလငျပွတျသားအောငျလုပျဆောငျပေးတဲ့ အပိုငျးဖွဈပါတယျ။ဂရပျဖဈကဒျနှငျ့ Motherboard တို့ ရဲ.အလုပျလုပျပုံတို့ ဟာလညျး ကိုကျညီဖို့ လိုပါတယျ။ graphics processing unit လို့ လူသိမြားတဲ့ GPU ကဒျဟာ ဂိမျးကစားခွငျး ၊ ဒီဇိုငျးဆှဲခွငျးတှမှော အရမျးကို အရေးပါတဲ့ ကှနျပြူ တာ hardware ပစ်စညျးဖွဈပါတယျ။ဂရပျဖဈကဒျကို လုပျငနျးလိုအပျခကျြမြားအရ ၂ ကဒျ သို့ မဟုတျ ၃ ကဒျ ထိ တပျဆငျနိုငျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ အခွားသော ကှနျပြူ တာ ဆကျစပျပစ်စညျးတှနေဲ့ ကိုကျညီမှု ရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ။
central processing unit လို့ လူသိများတဲ့ ကွန်ပျူ တာ ပရိုဆက်ဆာ ဟာ ကွန်ပျူ တာတစ်လုံးမှာ အရေးအပါဆုံးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ပရိုဆက်ဆာရဲ. လုပ်ငန်းဟာ ကီးဘုတ်က ပေးပို့လာတဲ့ အချက်အလက်တွေကို တွက်ထုတ်ဖြေရှင်းပေးရသည့်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမကောင်းဆိုတာဟာလည်း ပရိုဆက်ဆာ အပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်ပါတယ်။ပရိုဆက်ဆာ ကောင်းခြင်းက လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို မြန်ဆန်စွာ ပြု လုပ်နိုင်ပါတယ်။ပရိုဆက်ဆာ ကို clockspeed အနေဖြင့် မြန်နှုန်းတွေတိုင်းတာနိုင်ပြီး ဈေးကွက်မှာတော့ မော်ဒယ်မြင့်လေ ဈေးကြီးလေပါပဲ။ပရိုဆက်ဆာဝယ်မည်ဆိုပါက အခြားသော ကွန်ပျူ တာပစ္စည်းတွေနှင့် ချိန်ညှိသင့်ပါတယ်။
central processing unit လို့ လူသိမြားတဲ့ ကှနျပြူ တာ ပရိုဆကျဆာ ဟာ ကှနျပြူ တာတဈလုံးမှာ အရေးအပါဆုံးလို့ ပွောနိုငျပါတယျ။ ပရိုဆကျဆာရဲ. လုပျငနျးဟာ ကီးဘုတျက ပေးပို့လာတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို တှကျထုတျဖွရှေငျးပေးရသညျ့အတှကျ စှမျးဆောငျရညျ ကောငျးမကောငျးဆိုတာဟာလညျး ပရိုဆကျဆာ အပျေါမှာ အမြားကွီးမူတညျပါတယျ။ပရိုဆကျဆာ ကောငျးခွငျးက လုပျငနျး ဆောငျရှကျခကျြမြားကို မွနျဆနျစှာ ပွု လုပျနိုငျပါတယျ။ပရိုဆကျဆာ ကို clockspeed အနဖွေငျ့ မွနျနှုနျးတှတေိုငျးတာနိုငျပွီး စြေးကှကျမှာတော့ မျောဒယျမွငျ့လေ စြေးကွီးလပေါပဲ။ပရိုဆကျဆာဝယျမညျဆိုပါက အခွားသော ကှနျပြူ တာပစ်စညျးတှနှေငျ့ ခြိနျညှိသငျ့ပါတယျ။
Cooling System အနေဖြင့် များစွာ အရေးကြီးပါတယ်။Cooling System မပါပဲ အသုံးပြု ပါက ကွန်ပျူ တာ ၏ မားသားဘုတ်နှင့်အတူ ပရိုဆက်ဆာပါ လောင်ကျွမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် အင်ဂျင်နီယာ ဒီဇိုင်းသမားတွေ၊ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ဂိမ်းကစားသူများဟာ နည်းပညာမြင့် Cooling System ကို တပ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ပုံမှန် Cooling System တစ်ခုမှာ အပူခံပြားတစ်ခုနှင့် ပန်ကာ တစ်ခု ရှိပြီး လျှပ်စစ် အပူကို အပူခံပြားမှ စုပ်ယူပြီးပန်ကာဖြင့် အပူကို အပြင်သို့ ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ အပူခံစနစ်ကို တပ်ဆင်မည်ဆိုပါက water cooling စနစ်ကို တပ်ဆင်သင့်ပြီး ဈေးတော့ ကြီးပါတယ်။
Cooling System အနဖွေငျ့ မြားစှာ အရေးကွီးပါတယျ။Cooling System မပါပဲ အသုံးပွု ပါက ကှနျပြူ တာ ၏ မားသားဘုတျနှငျ့အတူ ပရိုဆကျဆာပါ လောငျကြှမျးသှားနိုငျပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ အငျဂငျြနီယာ ဒီဇိုငျးသမားတှေ၊ဂရပျဖဈဒီဇိုငျးနှငျ့ ဂိမျးကစားသူမြားဟာ နညျးပညာမွငျ့ Cooling System ကို တပျဆငျသငျ့ပါတယျ။ပုံမှနျ Cooling System တဈခုမှာ အပူခံပွားတဈခုနှငျ့ ပနျကာ တဈခု ရှိပွီး လြှပျစဈ အပူကို အပူခံပွားမှ စုပျယူပွီးပနျကာဖွငျ့ အပူကို အပွငျသို့ ထုတျလှတျပါတယျ။ပိုပွီးကောငျးမှနျတဲ့ အပူခံစနဈကို တပျဆငျမညျဆိုပါက water cooling စနဈကို တပျဆငျသငျ့ပွီး စြေးတော့ ကွီးပါတယျ။
Random-access Memory ဟာ ကွန်ပျူ တာ ရဲ. ကီးဘုတ်မှ ၀င်လာသည့် အချက်အလက်များကို ပရိုဆက်ဆာသို့ မပို့ခင် ယာယီ သိမ်းဆည်းပေးထားပါတယ်။အချို. သော ဆော့ဝဲလ်များဟာ Random-access Memory ရဲ. အချက်အလက် အသွင်းအထုတ်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်တာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် Random-access Memory စနစ်ကို လိုသလို ၈ gigabytes သို့မဟုတ် ၁၂gigabytes အဖြစ်သင့်တော်သလို မြင့်တင်နိုင်ပါတယ်။
Random-access Memory ဟာ ကှနျပြူ တာ ရဲ. ကီးဘုတျမှ ဝငျလာသညျ့ အခကျြအလကျမြားကို ပရိုဆကျဆာသို့ မပို့ခငျ ယာယီ သိမျးဆညျးပေးထားပါတယျ။အခြို. သော ဆော့ဝဲလျမြားဟာ Random-access Memory ရဲ. အခကျြအလကျ အသှငျးအထုတျပျေါမှာ မူတညျပွီး အလုပျလုပျနိုငျတာပါ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ Random-access Memory စနဈကို လိုသလို ၈ gigabytes သို့မဟုတျ ၁၂gigabytes အဖွဈသငျ့တျောသလို မွငျ့တငျနိုငျပါတယျ။
ကွန်ပျူ တာတစ်လုံး၏ အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းသိုလှောင်ထားနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာကို လည်ပတ်နိုင်အောင်တပ်ဆင်ရသည့် ၀င်းဒိုးစနစ်အပါအ၀င် အခြားအချက်အလက်များကို လည်း Hard Drive က နေသိမ်းယူထားနိုင်ပါတယ်။Hard Drive မပါပဲ ကွန်ပျူတာ လည်ပတ်လို့ မရပါဘူး။Hard Drive မှာလည်းအမျိုးအစားများစွာရှိပါတယ်။Solid state drives က အခြား hard drives တွေထက်မြန်ဆန်ပေမဲ့ ဈေးကြီးပါတယ်။ မိမိလုပ်ငန်းလုပ်မည့် အပေါ်မူတည်ပြီး hard drives တွေကို ရွေးဝယ်နိုင်ပါတယ်။
ကှနျပြူ တာတဈလုံး၏ အခကျြအလကျမြားကို သိမျးဆညျးသိုလှောငျထားနိုငျတဲ့ ပစ်စညျးဖွဈပါတယျ။ကှနျပြူတာကို လညျပတျနိုငျအောငျတပျဆငျရသညျ့ ဝငျးဒိုးစနဈအပါအဝငျ အခွားအခကျြအလကျမြားကို လညျး Hard Drive က နသေိမျးယူထားနိုငျပါတယျ။Hard Drive မပါပဲ ကှနျပြူတာ လညျပတျလို့ မရပါဘူး။Hard Drive မှာလညျးအမြိုးအစားမြားစှာရှိပါတယျ။Solid state drives က အခွား hard drives တှထေကျမွနျဆနျပမေဲ့ စြေးကွီးပါတယျ။ မိမိလုပျငနျးလုပျမညျ့ အပျေါမူတညျပွီး hard drives တှကေို ရှေးဝယျနိုငျပါတယျ။
Operating System ကတော့ ကွန်ပျူ တာရဲ. စနစ်တစ်ခုလုံးကို မောင်းနှင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်နေပါတယ်။Operating System များစွာရှိပြီး ယခုဖော်ပြထားတာကတော့ မိုက်ခရိုဆော့ ကထုတ်တဲ့ ၀င်းဒိုး ၁၀ ဗားရှင်းပါ။ Operating System ကို တပ်ဆင်မည်ဆိုလျှင်မိမိကွန်ပျူ တာ၏ အခြားပစ္စည်းများနှင့် ချိန်ကြည့် ရပါမယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင် ကွန်ပျူ တာဟာ လေးလန်ပြီး နှေးကွေးသွားနိုင်ပါတယ်။Linux စနစ်ကတော့ လူသုံးနည်းပါတယ်။လုံခြုံရေးစနစ် ကောင်းပြီး အချို. ဆော့ဝဲလ်တွေကို လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှု တော့ရှိရပါမယ်။
Operating System ကတော့ ကှနျပြူ တာရဲ. စနဈတဈခုလုံးကို မောငျးနှငျတဲ့ ဆော့ဝဲလျဖွဈနပေါတယျ။Operating System မြားစှာရှိပွီး ယခုဖျောပွထားတာကတော့ မိုကျခရိုဆော့ ကထုတျတဲ့ ဝငျးဒိုး ၁၀ ဗားရှငျးပါ။ Operating System ကို တပျဆငျမညျဆိုလြှငျမိမိကှနျပြူ တာ၏ အခွားပစ်စညျးမြားနှငျ့ ခြိနျကွညျ့ ရပါမယျ။အဲ့ဒီလိုမဟုတျရငျ ကှနျပြူ တာဟာ လေးလနျပွီး နှေးကှေးသှားနိုငျပါတယျ။Linux စနဈကတော့ လူသုံးနညျးပါတယျ။လုံခွုံရေးစနဈ ကောငျးပွီး အခြို. ဆော့ဝဲလျတှကေို လုပျငနျးလုပျဖို့ အတှကျ လိုအပျတဲ့ကြှမျးကငျြမှု တော့ရှိရပါမယျ။
Optical Drives ဟာ ကွန်ပျူ တာ ၀င်းဒို စနစ်တပ်ဆင်ထည့်သွင်းဖို့ အတွက် အလွန်ကို အရေးပါ တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။အခြားသော CD /DVD အခွေများလည်းထည့်သွင်းကြည့်နိုင်ပြီး အမျိုးအစားများစွာရှိသည့် အနက် မိမိနှစ်သက်ရာကို ရွေးနိုင်ပါတယ်။
Optical Drives ဟာ ကှနျပြူ တာ ဝငျးဒို စနဈတပျဆငျထညျ့သှငျးဖို့ အတှကျ အလှနျကို အရေးပါ တဲ့ပစ်စညျးဖွဈပါတယျ။အခွားသော CD /DVD အခှမြေားလညျးထညျ့သှငျးကွညျ့နိုငျပွီး အမြိုးအစားမြားစှာရှိသညျ့ အနကျ မိမိနှဈသကျရာကို ရှေးနိုငျပါတယျ။
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို ပြု ပြင်တပ်ဆင်တော့မည်ဆိုလျှင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ တပ်ဆင်မှုများနေရာ ကျမကျကို အားလုံးစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ လျှပ်စစ်အတက်အကျများကြောင့် ပျက်စီးသွားခြင်းမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကှနျပြူတာတဈလုံးကို ပွု ပွငျတပျဆငျတော့မညျဆိုလြှငျ လြှပျစဈပစ်စညျးဖွဈသညျ့အတှကျ လိုအပျတဲ့ တပျဆငျမှုမြားနရော ကမြကကြို အားလုံးစဈဆေးသငျ့ပါတယျ။ လြှပျစဈပစ်စညျးမြား၏ လြှပျစဈအတကျအကမြားကွောငျ့ ပကျြစီးသှားခွငျးမြိုးဖွဈပျေါလာနိုငျပါတယျ။
ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများတစ်နေရာထဲ တစ်စုထဲတပ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် ပစ္စည်းတပ်ဆင်နိုင်သည့် Case တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။Case အနေဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိပြီး မိမိ တပ်ဆင်မည့် ပစ္စည်းများအပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးခြယ်နိုင်ပါတယ်။
ကှနျပြူတာပစ်စညျးမြားတဈနရောထဲ တဈစုထဲတပျဆငျနိုငျရနျအတှကျ ပစ်စညျးတပျဆငျနိုငျသညျ့ Case တဈခုလိုအပျပါတယျ။Case အနဖွေငျ့ ပုံစံအမြိုးမြိုး ရှိပွီး မိမိ တပျဆငျမညျ့ ပစ်စညျးမြားအပျေါမူတညျပွီး ရှေးခွယျနိုငျပါတယျ။
ကွန်ပျူ တာ ပါဝါစနစ်ကို ကွန်ပျူ တာ၏ မားသားဘုတ်နှင့်အတူ အခြားသော ပစ္စည်းများ၏ လုပ်ငန်းပိုင်းအတွက် လိုအပ်သည့် လျှပ်စစ် ခွဲဝေစနစ်အတွက် အသုံးပြု ခြင်းဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် ပါဝါကို မားသားဘုတ် ၊ Optical Drives နှင့် Hard Drive များကို မောင်းနှင်နိုင်ရန် အတွက် အသုံးပြု သည်။မိမိ ကွန်ပျူ တာ ပစ္စည်းဖြင့် ကိုက်ညီသည့် ပါဝါ စနစ်ကို ရွေးခြယ်ရန်အထူးလိုအပ်သည်။
ကှနျပြူ တာ ပါဝါစနဈကို ကှနျပြူ တာ၏ မားသားဘုတျနှငျ့အတူ အခွားသော ပစ်စညျးမြား၏ လုပျငနျးပိုငျးအတှကျ လိုအပျသညျ့ လြှပျစဈ ခှဲဝစေနဈအတှကျ အသုံးပွု ခွငျးဖွဈသညျ။ အမြားအားဖွငျ့ ပါဝါကို မားသားဘုတျ ၊ Optical Drives နှငျ့ Hard Drive မြားကို မောငျးနှငျနိုငျရနျ အတှကျ အသုံးပွု သညျ။မိမိ ကှနျပြူ တာ ပစ်စညျးဖွငျ့ ကိုကျညီသညျ့ ပါဝါ စနဈကို ရှေးခွယျရနျအထူးလိုအပျသညျ။
uninterruptible power supply စနစ်ကို ကွန်ပျူ တာ ပါဝါ စနစ်အတွက် အထောက်အကူပြု အသုံးပြု သင့်သည်။UPS ၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ ကွန်ပျူ တာ desktop များတွင် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မသွားအောင်ပြု လုပ်ပေးထားနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်သွားချိန်တွင် ကွန်ပျူ တာကို အချက်အလက်များသိမ်းဆည်းထားနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူပြု ပြီး ဓာတ်ခဲအားကုန်ခန်းနေသည့် လက်တော့ကွန်ပျူ တာများအတွက်လည်း အထူးအသုံးဝင်သည်။
uninterruptible power supply စနဈကို ကှနျပြူ တာ ပါဝါ စနဈအတှကျ အထောကျအကူပွု အသုံးပွု သငျ့သညျ။UPS ၏ အဓိကလုပျငနျးမှာ ကှနျပြူ တာ desktop မြားတှငျ လြှပျစဈပွတျတောကျမသှားအောငျပွု လုပျပေးထားနိုငျသညျ။ လြှပျစဈမီး ပွတျတောကျသှားခြိနျတှငျ ကှနျပြူ တာကို အခကျြအလကျမြားသိမျးဆညျးထားနိုငျရနျအတှကျ အထောကျအကူပွု ပွီး ဓာတျခဲအားကုနျခနျးနသေညျ့ လကျတော့ကှနျပြူ တာမြားအတှကျလညျး အထူးအသုံးဝငျသညျ။